Home » Aha! Jokes, Satire » ဖုန်းသံနောက်မှ လက်မည်းကြီး
Posted by မောင်ရိုး on Jun 28, 2015 in Aha! Jokes, Satire, Creative Writing | 15 comments
မန်းဂဇက် ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် ဆက်လက်ရှုစားကြတော်မူကြစေကုန် ………
ဆာ ဆာ က အန်ဒရယ် ကြို သိ ပြီးး သားး မို့ သတိ မပေးး တော့ ဘူးး နော်….
လင်ဇီး…ဂါနိုပေါ်စကတည်းက.. သူတို့ဟောတာပြောတာနားထောင်…. ကလေးအတွေးလေးနဲ့ကို.. စိတ်ပျက်မိခဲ့တာပါ…
ခုနောက်ပိုင်းဆို…. သူတို့ မစားရ ဝခမမ်းပြောတာတွေ.. အပြောကိုမခံတာ… စကတည်းက.. ကျမအဲ့ဒီလုပ်ငန်းသဘာဝကို… သဘောမကျ…စိတ်မဝင်စားဘူးပိတ်ပြောပစ်တာ.. ဘယ်နှယ်…စီဗစ်တစ်ဗူးကို… ရှစ်ထောင်လောက်ပေးဝယ်သောက်ရအောင်.. ပိုက်ဆံမပေါဘူး..
..တစ်ခါတလေမှာ ရှုံးမယ်မှန်းသိသိနဲ့ လုပ်လိုက်ရတာလဲ ရှိသေးတယ်ခင်ဗျာ …
Social Norms တွေ
.အဲဒီ မာကက်တင်းမျိုး သူများနိုင်ငံတွေမှာ ဖမ်းတယ်ကြားဖူးတယ်။
AMWAY တို့ GIFFARINE တို့ လည်း အတူတူပါ ကိုရင်ဆာ…
သူတို့ အဟောအပြောကောင်းပုံက …..
အဲ့လိုဟာမျိုး လာ အဆွယ်ခံရဖူးတယ်…
လင်ဇီးကတော့ 1990 လောက်မှာ စပြီးအခြေတည်လာတယ်လို့ထင်ပါတယ်
သများ လေကျက်မဂျီးကောင်း အဲ့ ကျန်းမာရေးကောင်းတယ်သိလား အာ့လေးလာပြောဒါ။
အိမ်က လာဆွယ်ဖူးသေးတယ်.. S-Nature တဲ့.. ၇သောင်းက စတယ်ဆိုပဲ.. အလုပ်လည်း ထွက်စရာမလိုဘူး.. အပိုဝင်ငွေရတယ်.. ဘာညာနဲ့.. စိတ်မဝင်စားဘူးလိုိ့ အပြတ်ပြောလိုက်တယ်… အာပေါက်အောင်လည်း သူများကို ရှင်းမပြနိုင်ဘူးလို့… ဆွယ်တာလည်း စိတ်မဝင်စားဘူးလို့.. အောင်မယ်လေး.. အဲ့တုန်းကများ ငြိုငြင်ခံရသေးတယ်… ခုတော့ အမေကိုယ်တိုင်က ငါ့သမီး စိတ်မဝင်စားခဲ့တာ တော်သေးတဲ့..